प्रचण्डको निशानामा अब राष्ट्रपति भण्डारी, सार्वजनिक रुपमै यस्तो घोषणा गरेपछि शीतलनिवासमा खैलाबैला ! (भिडियोसहित) - Public 24Khabar
Home News प्रचण्डको निशानामा अब राष्ट्रपति भण्डारी, सार्वजनिक रुपमै यस्तो घोषणा गरेपछि शीतलनिवासमा खैलाबैला...
प्रचण्डको निशानामा अब राष्ट्रपति भण्डारी, सार्वजनिक रुपमै यस्तो घोषणा गरेपछि शीतलनिवासमा खैलाबैला ! (भिडियोसहित)
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि एकचोटी हिट बनेका छन् । प्रचण्डसहितको गठबन्धन मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढालेपछि उनी दंग छन् ।
यसैबीच, प्रचण्डको अर्को सार्वजनिक घोषणाले राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा तरंग पैदा भएको छ । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधान, लोकतन्त्र र मुलुकका विरुद्ध गतिविधि गरेको र ती गतिविधि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने एजेण्डाबारे विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल नभएको भन्दै प्रचण्डले पुनस्र्थापित संसदमा छलफल हुन सक्ने औंल्याए । उनले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर महाअभियोग लगाउन दुईतिहाई सांसदको आवश्यकता पर्छ त्यसकारण प्रचण्डले चेतावनी दिएपनि तत्काल महाअभियोगको सम्भावना देखिदैँन् ।
मदन भण्डारीको जीवन संगिनी हुनुको नाताले धेरै ठूलो अवसर भए पनि राष्ट्रपतिले त्यो अवसर गुमाएको टिप्पणी गरे ।
भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिले उनलाई देशको राष्ट्रपति नभई केपी ओलीको कारिन्दाका रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप प्रचण्डले लगाए ।
संविधानमाथि प्रहार हुँदा रक्षकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने राष्ट्रपतिले ओलीका सबै अवैधानिक कामलाई मान्यता दिनु र राष्ट्रपति हुँ, जे मा सही गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्नु गणतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।
राष्ट्रपतिका लागि सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण नरहेको पनि प्रचण्डले उल्लेख गरे ।
‘उहाँले जसरी संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रहितप्रति लापरबाही गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले ल्याउने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रविरोधी कामका लागि पनि सजिलै हस्ताक्षर ग्रिदिएका कारण उहाँलाई सहज छैन’, उनले भने ।
Previous article२८ असारको फैसलालाई नजिर मान्दै राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्चमा उजुरी ! (सहि कि गलत ? )
Next articleसबैभन्दा पहिला अमेरिकाले नै दियो नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई, के – के भन्यो यस्तो छ सन्देश (भिडियो हेर्नुहोस)